यसरी भएको थियो क. मित्रमणि आचार्यको हत्या - Left Review Online
सन्दर्भः क. मित्रमणि आचार्य स्मृति दिवस
मित्रमणिलाई भरतपुर अस्पताल पुर्‍याई सकिएको रहेछ । हामी क्याम्पसबाट अस्पताल भेट्न गयौँ । अस्पतालको भुईंमा बेहोश अवस्थामा लडिरहेको पायौँ । आखिर भोलिपल्ट बिहान अर्थात् बैशाख १८ गते मित्रमणि आचार्य यस संसारमा रहेनन् ।
घटना २०४२ साल बैशाखको हो । चितवनको मेघौली हाई स्कुलमा क्यारम बोर्ड खेलबाट विवाद सुरु भएर राजनीतिक रुप लिँदै थियो । विद्यार्थीहरु विभिन्न समूहमा आवद्ध भएकाले आफ्नो समूहलाई माथि उचाल्ने र अर्काको समूहलाई पछार्ने क्रमहरु देखिन थाले ।
विद्यालयको ब्ल्याक बोर्डमा जिन्दावाद, मुर्दावाद जस्ता नाराहरु पनि दखिन थाले । घटना विद्यार्थीमा मात्र सिमित रहेन । शिक्षक तथा अभिभावकहरुमा पनि उक्त घटनाको असर पर्न थाल्यो । स्थिति सामान्य होला भन्दा झनझन्‌ बिग्रिन थाल्यो ।
त्यस स्कुलमा नारायण भन्ने मास्टर (शिक्षक) ले पढाउन थालेपछि यस्ता घटनाहरुमा राजनीतिकि गन्ध आउन थालेको महशुस भयो । त्यसपछि नारायण मास्टरलाई हटाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो ।
नारायण मास्टर काँग्रेस भएकोले काँग्रेसहरुले हटाउन चाहेनन्‌ भने कम्युनिस्टहरुले हटाउनु पर्छ भन्ने माग राखे । घटना झन्‌ चर्कियो । जिल्लाभरी सनसनी फैलियो । त्यस घटनालाई लिएर पर्साढापमा बैशाख १७ गते ठूलो बैठक बस्ने भयो ।
त्यसबेला म रामपुर क्याम्पसमा पढ्थेँ । बैशाख १६ गते साँझ स्ववियुको कोठामा बैठक थियो । स्ववियुका कर्मचारीहरुले म त्यही क्षेत्रको भएकाले मेघौलीको घटनाबारे जान्न मलाई बोलाए । म गएर आफूले थाहा पाएसम्मको जानकारी दिएँ ।
बैशाख १७ गते काँग्रेसहरुकोतर्फबाट नारायण सरलाई स्कुलबाट ननिकाल्न ठूलै प्रयास हुने र अन्त्यमा केही सिप नलागे कम्युनिस्टहरुलाई मारेर फाल्ने पूर्वतयारी भइसकेको छ भन्ने सुराक थाहा भइसकेको थियो ।
त्यो पनि कसरी थाहा भएको भने दिव्यनगरमा एकजना यमुना न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो । उहाँको घर बाटोमा थियो । घरको आँगनमा मेरो बुवा, पर्साढापका प्रताप गुरुङ र यमुना कुरा गरेर बस्नुहुन्थ्यो । त्यस्तैमा एक जत्था हुल्याहा केटाहरु जीपमा चढेर पर्साढापतिर लाग्दै गरेको र “१७ गतेका लागि छुरी, चेन (साइकल र मोटर साइकलको चेन) र भाला लिएर आउनु पर्छ है” भनेको सुन्नुभएको थियो ।
त्यो कुरा रामपुरमा मैले गाउँका ठिटाहरुबाट थाहा पाइसकेको थिएँ । मैले त्यो सम्पूर्ण कुरा बताएपछि भोलिपल्ट अर्थात बैशाख १७ गते युनियनका पदाधिकारीहरु कोही पनि बाहिर निस्कनु राम्रो छैन भन्ने सूचना दिएँ । स्ववियुका सबै पदाधिकारीमा छलफल भयो र नजाने टुंगोमा सबै आ-आफ्नो कोठामा लागे । म पनि आफ्नो कोठातिर लागेँ ।
भोलिपल्ट बिहानको पढाइ थियो । म कक्षातिर लागेँ । मित्रमणि आचार्य मभन्दा एक ब्याच जुनियर थिए । उनका ४-५ जना साथीहरु कक्षामा आएनन् । पछि सुनेँ, ‘टीका भन्ने एक जना साथीले लफंगा केटाहरुसँग नि डराउने हो भने देशमा कसरी क्रान्ति गर्न सकिन्छ त ?’ भनेर उक्साएर लगे रे भन्ने ।
साँच्चै हो कि के हो ? त्यो मलाई थाहा भएन । तर सोही दिन साँझ सुनेँ, ‘मित्रमणि सहित ४-५ जना मरणासन्न हुने गरी पिटिएको भनेर । सारा क्याम्पसभरी होहल्ला भयो ।
उनी मेरो साह्रै नजिकका मित्र थिए । उनको मृत्युपछि मलाई असैह्य वेदना भयो । ‘रे’को भरमा सुनेका कुराहरुकै आधारमा मैले टीकासँग झगडा गरेँ । उनलाई ‘तैँले गर्दा मित्रमणिको ज्यान गयो भनेर ।’ पछि टीकाले आफूले त्यस्तो कुरा नभनेको र टाढैबाट घटनाको अवलोकन गर्न भनेर जाँदा हुल्याहरुले बाटैमा छोपेर कुटेको कुरा बताए ।
क. मित्रमणि आचार्य को हत्या हुनसक्ने पूर्व संकेत हुँदाहुँदै पनि असावधानीका कारण ज्यान गुम्यो । त्यसो हुनुमा मलाई विश्वास नगर्ने वातावरण सिर्जना भएको थियो त्यसबेला । चौथो महाधिवेशन पार्टीमा अल्पमत र बहुमतको नाममा पार्टीमा विभाजन भएको थियो । म अल्पमत पक्षको तावेदार हुँ भन्ने उनीहरुलेको ब्याख्या थियो भने उनीहरु बहुमत पक्षमा थिए । तर म आफैलाई भने त्यसबेलासम्म अल्पमत र बहुमतको विवादबारे धेरै कुरा प्रष्टसँग थाहा थिएन ।
क. मित्रमणि आचार्यः एक क्रान्तिकारी योद्धा
(लेखक शहीद क. मित्रमणि आचार्य का साथी तथा कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ ।)
पछिल्लाे - विषम परिस्थितिमा दलहरु बिच एकता र सहकार्य आवश्यक – क. कृष्णबहादुर महरा
अघिल्लाे - क. मित्रमणि आचार्य – एक जुझारू क्रान्तियोद्धा